"Waxay Ii Dhaawacday Sida Cadaabta..." Thomas Muller Oo Murugo Seexan Waayey - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha Maanta“Waxay Ii Dhaawacday Sida Cadaabta…” Thomas Muller Oo Murugo Seexan Waayey
“Waxay Ii Dhaawacday Sida Cadaabta…” Thomas Muller Oo Murugo Seexan Waayey
Xiddiga reer Germany ee Thomas Muller ayaa sheegay in uu u dhaawacmay ‘sidii qof cadaab ku dhacay oo kale’, kaddib markii uu xulka qarankiisu ka hadhay tartanka Euro iyagoo Ingiriisku ku garaaceen 2-0.
Xulka qaranka England ayaa 2-0 ku garaacay Germany Salaasadii oo ay ku wada ciyaareen garoonka Wembley iyadoo 15kii daqiiqadood ee ugu dambeeyey ay laba gool ka kala dhaliyeen Raheem Sterling iyo Harry Kane.
Laakiin Thomas Muller ayaa hurdada ka ladi waayey fursad beddeli lahayd natiijada ciyaarta oo xulkiisu kusoo noolaan lahaa, isla markaana uu 1-1 kaga dhigi karayay ciyaarta, kaddib markii ay goolhaye Jordan Pickford isku-kaliyeysteen laakiin uu kubadda khasaariyey.
Thomas Muller oo xulka Germany dib loogu soo celiyey markii u horreysay tan iyo Koobkii Adduunka 2018, waxa uu sheegay in fursadda uu khasaariyey ay u geysatay dhaawac.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Instagram ayuu ku yidhi: “Waa marxalad maskaxdaada ku dhegta, waa mid hurdada kuu diidaysa habeenkii.
“In aad hesho fursaddan oo aad khasaariso, waxay kuu dhaawacaysaa sida cadaabta. Waxay dhaawacaysaa kooxda oo dhan, ciyaartoyda iyo tababareyaasha kalsoonida i siiyey.”
Dhinaca kale, tababaraha xulka qaranka Germany ee Joachim Low ayaa qirtay in kooxdiisu ay ku liidatay dhalinta oo marka ay goolka ku dhowaato ay fursadaha luminaysay.
“Kama aanaan faa’iidaysanin labadii fursadood ee ugu waaweynaa ee ay heleen Muller iyo Wernere. Way in aanay kooxina doonayn inay qaadato khataro badan, khaasatan shaqada difaaca. Waxa la filayay in fursado badan aan la abuurin ciyaarta, balse waxay ahayd in aanu ka faa’iidaysano fursadahayaga.” Ayuu yidhi.